ICQ အကောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - ICQ - 2019
အတော်လေးရုရှားငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုအများကြီးနှင့်ကမ္ဘာချိန်ခွင်လျှာစာရွက်မှသူတို့၏သုံးစွဲသူများကသိုလှောင်မှုစနစ်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းလက်လှမ်း၏အဆင်ပြေနည်းလမ်းအဆင်သင့်အသုံးအနှုန်းများနှင့်အတူဘဏ်ကဒ်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းပေးပါ။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောစနစ် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဗီဇာ QIWI မြေပုံရရှိရန်မည်သို့
အချိန်ကြာမြင့်စွာ QIWI system ကိုမဆိုအသုံးပြုသူမှရရှိနိုင်ကတ်ခဲ့ကြသူအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုဤသစ်ကိုမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကီဝီမြေပြင်ဆုံးရှုံးကြသည်မဟုတ်။ နှစ်တွေကုမ္ပဏီအနည်းငယ်က၎င်း၏မူဝါဒအားပြောင်းလဲသောအခြေအနေများသည်အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအဆင်သင့်ဖြစ်လာသည်အသစ်စွမ်းရည်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: တစ် QIWI-ပိုက်ဆံအိတ် Creating
QIWI ငွေပေးချေမှုစနစ်ကနေဗီဇာကဒ် Make အလွန်လွယ်ကူစွာနှင့်လျင်မြန်စွာဖြစ်နိုငျသညျ, ကသာမောက်အကြိမ်အနည်းငယ် click နှိပ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ကဒ်များအတွက်လိုအပ်သောဒေတာများကိုရိုက်ထည့်ပါဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဆနျးစစျကွကုနျအံ့, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမမေးခွန်းများကိုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုသူတို့ပိုက်ဆံအိတ်မှချည်ထားသောလျှင်တစ်ဦးရဲ့ login နဲ့ password ကနေတဆင့်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်၏အသုံးပြုသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဓိက menu ကိုမှာ search box ထဲမှာသင် item တခုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် "ဘဏ်ကတ်များ"အရာတွင် Kiwi ကဒ်ဒီဇိုင်းကိုစတင်ရန်နှိပ်ပါ။
အခုဆိုရင်သင်မြင်ရန်ရှိသည် "QIWI ကဒ်များ" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အမိန့်ကဒ်".
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်နှစ်ခုထက်ပိုသောခလုတ်ရှိပါတယ်ထားတဲ့အောက်မှာ QIWI ဗီဇာပလတ်စတစ်ကတ်အတိုဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူကို click သင့်တယ် "ကို Select လုပ်ပါကတ်"ရှယ်ယာမှာအကျိုးစီးပွား၏ရွေးချယ်မှု, အသီးသီးသွားကြဖို့။
သင်တို့သည်လည်းပစ္စည်းကို click နိုင်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါကတ်များနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို"ကုန်ကျစရိတ်, အဖိုးအခ, ကန့်သတ်, အခကြေးငွေနှင့်ကဒ်အမျိုးအစားတခုချင်းစီအကြောင်းကိုအခြားအချက်အလက်ရှာဖွေရန်။
ဒီအဆင့်မှာအသုံးပြုသူသူလိုအပ်တယ်သောအရာကိုကဒ်တစ်ဦးရှေးခယျြမှု, အောင်။ အခြားသူများထံမှအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်အသီးအသီးသောအသုံးမျိုးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသူကိုရှေးခယျြသောအရာကိုမသိလျှင်, သင်ယခင်ခြေလှမ်း, အမှတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်တစ်ဦးချင်းစီကဒ်အသေးစိတ်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် "ဟုအဆိုပါကတ်များနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို"။ QIWI ဗီဇာပလတ်စတစ်ချစ်ပ် (ခေတ်သစ်နှင့်အဆင်ပြေကဒ်) - ဥပမာ, အကောင်းဆုံး option ကိုယူပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "ဝယ်ကဒ်".
သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကဒ်နဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်, သင်စာချုပ်နှင့်ပလပ်စတစ်ကဒ်သူ့ဟာသူ (အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော) ရက်နေ့တွင်ပြသပါလိမ့်မည်သည့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်ရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ site ပေါ်တွင်သင့်လျော်သောလိုင်းကိုရန်လိုအပ်သော data အားလုံးကိုထည့်သွင်းရန်။
သငျသညျပေးပို့ကဒ်တစ်ရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းကိုအောင်နိုငျသညျ, နည်းနည်းအောက်ကိုဆင်း။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရွေးချယ်ပြီးပေးပို့များ၏အလိုရှိသောအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်။ ဥပမာအားဖြင့်, "ရုရှားမေးလ် ... ".
တစ်ဆက်သားအဖြစ်ဒီတော့နှင့်မေးလ်ကအောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သာလိပ်စာမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကုဒ်, မြို့, လမ်း, အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်တိုက်ခန်းတွင်ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။
အသုံးပြုသူများနှင့်လိပ်စာအကြောင်းကို data အားလုံးကိုထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြပြီးတာနဲ့သင် button ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ် "ဝယ်ယူမည်"မှတ်ပုံတင်ကဒ်နှင့်အမိန့်ကနောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့။
ထို့နောက်သင်ထည့်သွင်းအားလုံးဒေတာ, Pre-စမ်းသပ်ရန်သူတို့ကိုအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကျေနပ်မှုရှိပါသလဲတဲ့အခါမှာ, သင် button ကိုနှိပ်ဖို့ရှိသည် "Confirm".
သင့်လျော်သောပုံစံကိုဝင်ရမည်ဖြစ်သည့်အတည်ပြုရန်ကုဒ်နှင့်အတူ လာ. ထပ် button ကို click ရန်ဖုန်းတွင် "Confirm".
အများအားဖြင့်ချက်ချင်းနီးပါးကဒ်နှင့် PIN ကို-code တွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုနဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရရှိကြသည်။ PIN ကိုကဒ်နှင့်အတူစာတစ်စောင်အတွက်ကော်ပီပွားယူသည်။2ပတ် - ယခုငါတို့အကြောင်းကို 1.5 အတွက်မေးလ်ထဲမှာလာမယ့်ကဒ်အဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။
ရှည်လျားသောကဒ်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် (သို့မဟုတ်အတိုကောက်, အရာအားလုံးပေးပို့၏ရွေးကောက်တော်မူသောနည်းလမ်းနှင့်ရုရှား Post ကို၏လုပျငနျးပေါ်တွင်မူတည်သည်), သငျသညျဆိုင်များနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအသုံးပြုစတင်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်သူမ၏နှင့်အတူတိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်ကဒ်ကိုသက်ဝင် - သို့သော်မီ, သင်တဦးတည်းကိုပိုပြီးနည်းနည်းအရေးယူလုပျဆောငျရမညျ။
ပထမဦးစွာသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့် re-ရိုက်ထည့်ပါနှင့် tab ကိုသှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်, "ဘဏ်ကတ်များ" ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဓိက menu ကနေ။
သာယခုယင်းအပိုင်းရှိ "QIWI ကဒ်များ" ဒါကြောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား button ကိုရွေးဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည် - "Activate Card ကို".
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်သင်သည်ကဒ်နံပါတ်ထည့်သွင်းရန်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်, ထိုပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်။ QIWI ဗီဇာပလတ်စတစ်ရဲ့အရှေ့ဘက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့နံပါတ်။ ရုံ button ကိုနှိပ် "Activate Card ကို".
ဤအချက်မှာ, ဖုန်းကဒ်၏အောင်မြင်သော activation အကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုခံယူသင့်ပါတယ်။ Plus အားတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုဒါမှမဟုတ်ကဒ် PIN နံပါတ်ကို-code ကိုဖြစ်မယ့်စာ၌ (များသောအားဖြင့်ယင်း၏အမှတ်ထိုအရပ်၌ရှိ) ။
ဒါကတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့င်, သင်ငွေပေးချေမှုစနစ်အား QIWI ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေတစ်ကဒ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့တိကျစွာကဒ်၏မှတ်ပုံတင်နှင့် activation ၏, မတစ်ခုတည်းမေးခွန်းကိုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်နေဆဲတတ်နိုင်သမျှဖော်ပြရန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ တစ်ခုခုနေဆဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပါရှိလျှင်, မှတ်ချက်များအတွက်သင်၏မေးခွန်းရေးလိုက်ကျနော်တို့နားလည်ရန်ကြိုးစားပါ။
ဗီဒီယို Watch: ICQ - ICQ (နိုဝင်ဘာလ 2019).